जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि राजाले नै मालीको काम गरेपछि ...! - Sagarmatha Online News Portal
एजेन्सी । विश्व मानव इतिहासमा पत्याउँनै नसकिने घटनाहरु धेरै हुन्छन्, र भैरहेका छन् । क्रुर पूर्व शासक गद्धाफी होस या किमजोङ उन ! यीनीहरुभन्दा कयौंगुणा क्रुर शासक हिटलरको कार्यशैली त झन पत्याउनै नसकिने प्रशस्त थिए । र विश्व मानव इतिहासमा यस्ता मानविय संवेदना भएका शासकहरु पनि प्रशस्तै छन् । जसले पत्याउनै नसकिने कामहरु गरेर आम जनताको सेवा गरिरहेका छन् ।
पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रमा पर्ने देश घानाको आदिवासी समुदायका नयाँ राजा मानूले अहिले विश्व समुदायलाई नै अचम्मित र स्तब्ध बनाएका छन् । मानूको उदार मानविय संवेदनालाई देख्ने र सुन्ने सबैले जिब्रो टोक्दै भन्छन्, ‘राजाले पनि मालीको काम गर्ने जागिर गर्दैछन्, त्यो पनि विदेशी भूमिमा !’ हो झट्ट सुन्दा पत्यारै नलाग्न सक्छ । तर, उनको बारेमा लेखिएका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्टाटस र फोटो हेरेपछि पत्याउन करै लाग्छ !
मानूभन्दा अगाडि उनकै काका द्याट राजा थिए । ६७ वर्षका द्याटको निधन भएपछि मानू नयाँ राजा भएका हुन् । मानू राजा हुनुभन्दा अगाडि क्यानाडामा माली काम गर्थे । उनी ३ वर्षदेखि आफूले गरिरहेको माली काम छाडेर पत्नीसहित आफ्नो गाउँ अदान्सी अदोआबो फर्किए, र ६ हजार जनताको राजा भएर बसे । तर केहि समयअघि उनी फेरी क्यानडा गएका छन् । त्यही पुरानो काम गर्न । त्यो पनि मालीको काम गरेर आएको तलबले आफ्ना जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि !
अकान समुदायका यी राजा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा रहेको ‘द ल्यान्डस्केप कन्सल्ट्यान्ट्स’ नामक कम्पनीमा काम गर्छन् । मानूको राज्याभिषेक समारोहमा कम्पनीकी सञ्चालक सुसान वाट्सन घाना पुगेकी थिइन् । त्यसपछि उनले समुदायलाई सहयोग गर्न एउटा गैरनाफामुखी संस्था पनि खोलिदिएका छन् । संस्थाले गत वर्ष समुदायलाई शैक्षिक सामग्री, लत्ताकपडा, औषधि र केही थान ल्यापटप उपलब्ध गराएका थिए । आफ्नो गरिब समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि पैसा जुटाउन क्यानडामा मालीको काम गरिरहेका राजा मानू भन्छन, ‘राजा हुनु भनेको ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हो ।’
Published On: १९ असार २०७६, बिहीबार